Qorshahan waxaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron.
Cameron ayaa sheegay in ciidamada British-ka ee tagaya Soomaaliya ay gacan ka geysan doonaan sidii looga adkaan lahaa kooxda ku xiran Al-Qacida ee Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraaha Britain David Cameron, ayaa ku dhawaaqay in ciidamo British ah la geynayo Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed, si ay caawimaad u siiyaan howl-gallada nabad ilaalineed ee halkaas ka socda.
Ciidamada British-ka ee tagaya Soomaaliya iyo Sudan ayuu Mr. Camerom tiradooda ku sheegay 370 askari, waxaana uu intaas ku daray in faah-faahinta la xiriirta qorshahan uu kusoo bandhigi doono kullanka guud ee QM ee maanta oo isniin ah.
“Waxan u maleeneynaa in Britain ay kaalin gaar ah ku leedahay tababaarka, farsamo iyo khibrad siinta, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan sare u qaadno waxa aan sameeneyno” ayuu yiri Cameron, oo intaas ku daray “Waxa ka dhacaya Somalia, haddii ay wax wanaagsan kasoo baxaan, waxa ay u wanaagsan tahay Britain. Waxay la macno tahay argagaxisanimada oo yaraata, muhaajriinta oo yaraada, iyo burcad badeednimada oo yaraata”.
Ciidamada British-ka ayaan ku lug yeelan doonin wax howl-gallo dagaal ah, waxaana howshooda ugu weyn ay noqon doontaa inay kaalmo ka kooban farsamo, caafimaad iyo injineernimo siiyaan howl-gallada nabad ilaalinta Soomaaliya iyo Suudaanta Kionfureed.
Faransiiska Oo Duqeyn Cirka Ah Ka Fuliyey Siiriya
Afghanistan: Taageerada ISIS oo sii Kordhaysa
Rouhani: QM ha Baarto Shilkii Xajka